Sidee loo hagaajiyaa erayada? Siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu
Sidee loo hagaajiyaa erayada?
Arday kasta oo baranaya luuqad shisheeye wuxuu weydiinayaa su’aashan. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aasaasi u ah hagaajinta ereyada, kaas oo aan ku dabooli doonno maqaalkan:
1. Dhageysiga iyo ku celinta ereyada aad rabto inaad xasuusato
2. Isticmaalida habka kaadhka cas
3. In la abuuro jaaliyado muuqaal ah
4. Isugeynta weedhaha iyo weedhaha ku jira erayada cusub
5. Magacyada erayada cusub
6. Isku ilaabi ereyada cusub oo ay la socdaan astaamahooda iyo shay kale
7. Ku daawashada filimada iyo fiidiyowyada luqadda aad baraneyso
Si aad uga jawaabto su’aasha “Sidee loo hagaajiyaa erayada?” waxa kale oo lagama maarmaan ah in la fahmo shakhsiyaadka ama dabeecada asalka ah ee xasuustaada. Dadka qaarkiis way ka fiicnaadeen oo si dhakhso ah u xusuustaan ​​ereyada cusub iyagoo dhegeysta, kuwa kale, qora iyo dib u eegista qoraalka qoraalka ayaa ah mid aad ufiican. Dad badan ayaa u arkaan inay waxtar u leedahay in ay xasuusiyaan erayada iyagoo isticmaalaya sawirro ama sawirro. Sidaa darteed, waxaad dooran kartaa hababka isku-dhafan ee lagu hagaajinayo eraybixinta kaas oo kugu habboon adiga.
Aynu u falanqeeyno hab kasta oo si gooni ah u tixgelineyno qalabka suurtogalka ah ee lagu gaaro waxtarka ugu sareeya
Dad badan ayaa xasuustaan ​​ereyada cusub si ay ugu caawiyaan dhageysiga joogtada ah.
Waxaad ka heli kartaa tiro fara badan oo cajalado maqal ah oo ka ciyaara ereyada cusub ee aad ka baran kartid alaabta aad baraneyso, laakiin waxa dhacaya haddii aad baraneysid kalabar erayada ku qoran duuban, laakiin waxay ku dhibtoonayaan inaad xasuusato erayada haray? Aynu ku qiranno in aan loo baahnayn in la dhagaysto dhammaan cajaladaha maqalka mar labaad iyo mar kale, haddii aad horey u qadarisay ereyo tiro badan. Intaas waxaa dheer, tirada soo noq-noqosho iyo xajmiga nuxurka u dhexeeya ereyada qof kasta waa inuu noqdaa mid ku saleysan astaamaha xusuustaada.
Ujeedadaas awgeed, waxaanu samaynay ciyaaryahaanka codka gaarka ah ee LingoCard, kaas oo aad ka tirtiri karto ereyada la barto oo kaliya oo dhagaysta kuwa aan dhab ahaantii ogeyn. Waxaad isku hagaajin kartaa tirooyinka erayada ku celceliska (ama tarjumadooda) iyo dhererka joogtada u dhexeeya ereyada ilaa meesha ugu habboon ee kuu shaqeyneysa.
Waxa kale oo suurtogal ah in la abuuro lana dhagaysto qalabka waxbarasho ee aad ka heshay faylal kasta oo qoraal ah. Si fudud u geli qoraalka tarjumada ciyaartoyga oo dhegeyso.
Habkani wuxuu si gaar ah wax ku ool yahay haddii aadan haysan waqti xaddidan oo lagu baranayo, maxaa yeelay waxaad maqli kartaa alaabta wax barashada waqti kasta iyo meel kasta.
Xilligan, tiro badan oo buugaag maqal ah oo ku saabsan mawduucyada qaarkood ayaa la heli karaa. Si aad u xasuusato ereyada cusub, waxaad sidoo kale ku dari kartaa liiskaaga codsigeena ka dibna dhageysanaya iyaga oo isticmaalaya ciyaaryahanka.
Habka ugu caansan ee hagaajinta erayada wuxuu abuurayaa kaarar qalabka, halka dhinac ka mid ah kaararka uu leeyahay erey adag oo xasuuseed, dhinaca kalena wuxuu leeyahay macnaha ama tarjumaadda erayga.
Ka dib markii aad sameysatid kaararka kaararka, waxaad bilowdaa inaad eegto iyaga, si tartiib ah u dhig meelo kaararka aad horey u soo baratay, ilaa aad ka baratay gogoldhiga oo dhan.
Kadib dhowr bilood oo la adeegsanayey habkan, waxaan horeyba u haystay dhowr boqol oo kaarar ah kuwaas oo ahaa kuwo aad u dhib badan.
Waxa kale oo aan rabay inaan bedelo amarka ereyada aan ku xusuusto, tusaale ahaan: hab-raaca, dib-u-qaabaynta xarafka, si aan kala sooc lahayn, maadooyinka iyo wixii la mid ah.
Sidaas darteed waxaan go’aansaday inaan isticmaalo casriga, laakiin ma heli karo codsi fudud oo sahlan. Sidaas awgeed waxaan lahaa fikrad ah samaynta codsi cusub oo casriga ah, laba bilood ka dib waxaan soo saaray codsigii ugu horreeyay ee mobile LingoCard oo leh kaararka flash iyo hal database. Waxay ahayd lagama maarmaan in la sameeyo kaararro leh ereyada erayada oo ay abuuraan dhowr database oo leh ereyada ugu waxtar badan. Waxaan bilaabay inaan ka doodo xulashooyinka fulinta qaar ka mid ah xirfadleyda xirfadleyda ah ee aan ogaa. Dadku waxay jecelyihiin fikradayda, maaddaama ay dhiirigeliyayaashu bilaabeen inay ku biiraan mashruuca. Ka dib markii ay fulinayaan fikrado cusub, waxaan go’aansanay inaanan joojin halkaa iyo horumariyey dhowr qalab oo u gaar ah oo horey loogu heli jiray laba habab oo kala duwan: Android iyo iOS. Waxaan ku martigelinnay barnaamijkeena bilaashka ah Google Play iyo Apple Store ee dhamaan wadamada iyo muwaadiniinta oo dhan.
Dad badani waxay leeyihiin xasuus wanaagsan oo muuqaal ah waxayna iyaga u noqon karaan kuwo aad wax ku ool u ah inay abuuraan ururo leh sawirro muuqaal ah. Tusaale ahaan, haddii aad aragto shay macnaha shisheeye ee aanad isla markiiba xasuusan karin, waxaad sawir u qaadan kartaa shaykan oo waxaad ku qori kartaa ereyga aad ku baraneyso luqadda aad wax ku baraneyso.
Codsigeena, waxaa suurtagal ah in la abuuro kaadhadhka qalabka sawirada kameradda ama sawirada internetka.
Sidaa darteed, haddii aad leedahay xasuus wanaagsan oo xasuusto oo aan xasuusan karin ereyada ama ereyada qaarkood, waxaad keligeed ku koobi kartaa ereygan mashiinka raadinta oo aad soo dejiso sawir kasta oo ku habboon, adoo ku lifaaqaya kaadhka casaanka.
Waa hab aad wax ku ool u ah hagaajinta erayada iyo barashada luuqad shisheeye. Sidaa darteed, waxaad isla markiiba xasuusataa farabadan erayada iyo qaabdhismeedka xukunka. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad soo qaadato xukun diyaarsan oo lagu sameeyo wada sheekeysi iyada oo aan loo baahnayn in eray kasta si gooni ah loogu soo celiyo.
Haddii erayada aad baraneyso ay leeyihiin macnooyin badan, qaabkani wuxuu noqon karaa mid wax soo saar leh. Tani waxay aad u badan tahay tusaale ahaan Ingiriisi, iyo in la fahmo isticmaalka ereyga, waxaa fiican in lagu xasuusto jumlad ahaan.
In ka badan 120 kun oo ah qaamuusyada mawduucyada kala duwan ayaa laga soo qaadaa boggayaga, qiyaastii kala bar waxay ka kooban yihiin odhaahyo iyo jumlado.
Ereyada aad wax ku baraneyso oo joogto ah oo sax ah ayaa kaa caawinaysa inaad ku xasuusato iyaga si fiican.
Habkani waa mid wanaagsan in la isticmaalo ka dib dhegeysiga erayga ereyada oo ku celcelis ah.
Isku day in aad la hadasho erayada kale ee la xiriira ama jumladaha.
Waxaanu ku siinnay kaararka luqadaha oo dhan oo leh maqal dhageysi luqad kasta si uu u maqlo tusaalaha saxda saxda ah.
Ka dib markii la bilaabay codka maqalka waa wax ku ool ah in lagu celiyo ereyada ereyada marka uu istaago, iyo ujeedkeeduna wuxuu u fiicanyahay in la kordhiyo dhererka joogsiyada u dhaxeeya ereyada ku yaala ereyada mulkiilaha ee ciyaartoyga.
Farsamada aadka u fiican waa inaad ku xasuusataa ereyada iyaga oo isku mid ah ama isku dheelitiran.
Dadka intooda badani waxay u maleynayaan in ay caawimaad ka helayaan ururrada, iyo in la aqbalo macluumaadka cusub waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh oo la xidhiidha barashada isku dhafka erayada isku midka ah ama kuwa ka soo horjeeda.
Waxaad isticmaali kartaa farsamadan adoo abuuraya kaadhadhka flashka leh isku midka ah iyo macnaha.
Download qaamuusyo leh isku midka ah isku midka ah iyo macnaha internetka ama waxaad ka heli kartaa barayaal badan oo isbarbar dhigaya luuqada aad baraneyso. Ka dib markii aad soo diyaarisid alaabta tababarka ee aad u baahan tahay, waxaad u gudbin kartaa xogta faylasha qoraalka ah iyo u gudbinta codsigeena. Sidaa darteed, waxaad abuuri doontaa xogtaada gaarka ah ee kaararka casriga ah ee aad wax ku baraneysid waxaadna suurtagal noqon doontaa inaad barato eray kasta oo isku dhafan iyadoo la adeegsanayo dhammaan qalabkayaga.
Waxaa intaa dheer, tiro badan oo kaarar ah oo la abuuray isku mid ah isla-qaabka iyo shay-yada ayaa horayba loo heli karaa macluumaadkaaga.
Iyada oo ay sabab u tahay isticmaalka habkan, waxaad ku xasuusin kartaa dhowr erey oo cusub oo leh macnahooda isku midka ah ama ka soo horjeeda, taas oo kuu ogolaaneysa inaad si weyn u hagaajiso ereyadaada.
Tani waxay noqon kartaa habka ugu sahlan ee waxtarka leh ee hagaajinta erayada, kaas oo si toos ah loogu adeegsan karo dadka ku hadla afka hooyo.
Waa hab fiican oo lagu xasuusto ereyada cusub ee saxda ah ee laga helo jawiga luqadda. Markaad baranayso luqad cusub, waxaa si gaar ah muhiim u ah in la fahmo ereyada iyo siyaado ah oo laga heli karo filimyada muuqaalka ah.
Waxaad u baahan tahay inaad go’aansato nooca luqadda ajnabiga ah ee aad rabto inaad waxbarto. Tusaale ahaan, Ingiriisku wuxuu leeyahay qaybo badan sida Ingriiska Ameerika, Australian Ingriiska, Ingriisiga Ingiriisiga, iyo wixii la mid ah. Iyada oo ku saleysan nooca luqadda aad doonayso inaad waxbarto, waxaad u baahan tahay inaad doorato filimada laga soo qaaday wadanka ku haboon.
Fiiri filimka marka hore leh subtitles si aad u aragto aragti fiican. Haddii aad maqasho erey ah oo aanad xasuusan karin hal mar, waxaad u baahan tahay inaad ku qorto ereyga oo aad ku celiso.
Marka erey adag oo la xasuusto ay kudhacdo filim, waxaan badanaa joojiyaa, tarjumaa, kuna koobaa codsiga LingoCard. Kadibna waxaan dhageystaa dhammaan ereyada ciyaaryahanada oo aan ku xasuusto isticmaalka kaararka.
Si loo xoojiyo maaddada, marka xigta waxaad daawan kartaa filimkaa adigoon lahayn subtitles – haddii aad dooratay filin aad u xiiso badan, aragtida labaad ma noqon doonto caajis.
Sidaa darteed, filim kasta oo aad daawato, waxaad u baahan doontaa inaad abuurto kaarar cusub iyo kaarar cusub, sababtoo ah ereyadaada ayaa si joogto ah u sii fidi doonta.
Ha illoobin sida caadiga ah; dejiso hadafka ah inaad aragto ugu yaraan hal filaan toddobaadkii luuqada aad ku baranayso, ama xitaa si ka sii fiican u daawato filimyada oo kaliya luuqada aad waxbarto iyo inyar ka dib, waxaad baran doontaa luqadda cusub.
Isku day inaad isticmaashid dhammaan hababka la heli karo si loo go’aamiyo kan ugu fiican ee adiga kugu habboon.
Markaad go’aansato doorashada oo aad fahamto naftaada sida aad ugu hagaajinayso ereygaaga ugu fiican, waxaad u baahan tahay inaad xasuusatid boosaska ugu muhiimsan ee barashada waxtarka leh:
1. Degenaansho. Waxaad u baahan tahay inaad maalin kasta wax barto.
2. Dooro kaliya qalabka ugu fiican ee tababarka
3. Go’aami waqtiga ugu fiican ee lagu baranayo iyo barashada qalabka cusub
4. Falanqee mugga maaddada la darsay
5. Samee hadaf cad oo qadarka maadiga ah si aad u xasuusato maalin walba iyo mugga wadarta
Codsiyadayada moobiillada, waxaan isku dayeynay inaan hirgelinno dhammaan hababka suurtagalka ah ee hagaajinta erayada iyo hadda waxay heli karaan dadka meel kasta oo adduunka ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ku rakibto codsiga xarkadaada oo aad iska diiwaan geliso nidaamka si aad ugu badbaadiso ereyadaada server-ka.
Waxaanu ka shaqeyneynaa sidii loo abuuri lahaa barxad caalami ah oo loogu talagalay dadka jinsiyadaha oo idil, oo siinaya fursad ay ku bartaan luuqadaha shisheeye oo ay ku bartaan luuqada dunida. Waxaan rajeynayaa in horumarinteenu ay si weyn u wanaajinayso waxtarka barashada iyo waxay kaa caawin doontaa inaad si weyn u hagaajiso ereyadaada.